Natomboka anio ny asa fanamboarana ny toeram-pialam-boly eny Ankaditapaka
auteur jona 3, 2014 Commentaires fermés
Novàna ho sehatra maitso ny dobo filomanosana eny Ankaditapaka Ankadifotsy ary natao ho toeram-pialamboly. Efa ela mantsy no tsy nampiasaina ny toerana na dia midadasika aza. Vola roa hetsy Euros no teti-bidim-panamboarana. Ny orinasa
Fanentanana mahakasika ny « sachets plastiques »
auteur jona 2, 2014 Commentaires fermés
Ho fanatsarana ny tontolo iainana sy hikajiana ny fahadiovana, dia tsara ny mahafantatra fa ireny « sachet plastique » ireny, dia tsy mety levona an-taonany maro raha ariana any anaty lakandrano na tatatra. Sady
Atrik’asa momba ny rafitra RF2
Tatitra momba ny atrik’asa mahakasika ny rafitra fikojana ny rano sy ny fahadiovana (RF II) izay natao tao amin’ny Bureau Municipal d’Hygiène (BMH) Isotry ny tontolo andron’ny Alarobia faha 28 may 2014. Teo ambany